Bendy and the Ink Machine 1.0.772 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.772 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း Bendy and the Ink Machine
Bendy and the Ink Machine ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Bendy နှင့်မှင်စက်™ထူးခြားတဲ့ကာတွန်းလေထုနှင့်သင်တစ်လျှောက်လုံးခန့်မှန်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ပြင်းထန်သော, ကြောက်မက်ဖွယ် storyline နဲ့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပဟေဠိ-action ကို-ထိတ်လန့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟင်နရီဟာသူ့ရဲ့ 1930 အထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်တုန်းကဂျို Drew Studios က, အကောင်းဆုံးသူတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ချစ်ရာသခင်သည်အကျင့်စာရိတ္တ, Bendy ၏ကာတွန်းကာတွန်းထုတ်လုပ်လူသိများခဲ့တဲ့စတူဒီယိုမှာခဲကာတွန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဟင်နရီဂျိုကနေလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖိတ်ကြားချက်ကိုဟောင်းကာတွန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့သူ့ကိုယ်သူ Drew လက်ခံ၏။ ဒီလိမ်ကာတွန်းအိပ်မက်ဆိုးများအသေအချာမသိရူးသို့နက်ရှိုင်းသောခရီး။
မှောင်မိုက် Fight ။ အဆိုပါမှင် Demon Escape ။ ယင်းစက်ကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
•မတူညီဂိမ်း Play! - ပထမဦးစွာလူတစ်တိုက်ခိုက်ရေး, ထိတ်လန့်, ပဟေဠိ, ကိုယ်ပျောက်နှင့်မြောက်မြားစွာကိုဝှကျထားလျှို့ဝှက်ချက်များ။
တစ်ဦးကလှပသောကာတွန်းကမ္ဘာ့ဖလား•! - မတ်ေတာရှိစှာသေးငယ်တဲ့ Indie စတူဒီယိုတို့ကလက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဦးကဂလိုဘယ် Bendy အဝန်း•! - နက်ရှိုင်းသောနက်နဲသောအရာကိုသို့ delve နှင့် joeydrewstudios.com မှာဆွေးနွေးမှု join
Bendy and the Ink Machine အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
h3loja စတိုး 599 982.51k
APK အေၾကာင္း Bendy and the Ink Machine အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.0.772
ထုတ်လုပ်သူ Joey Drew Studios
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://joeydrewstudios.com/privacypolicy
လက်မှတ် SHA1: 9F:AE:F9:8A:60:50:34:30:27:FF:E1:C0:25:91:DB:A5:95:00:D9:BB
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Tomagoyaky
အဖွဲ့အစည်း (O): Appchina_zhtx
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): HaiDian
Bendy and the Ink Machine APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ